u-Ashley, uMbhali kwiBhloko yePropathi yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba - realWW:
Archives Umbhali: ashley
ezaposwa ngomhla Disemba 11, 2019 by ashley
Gqi beliswa: I-Dec 11, 2019 04: 52
Ukurenta indlu akunakuba lula phantsi kweemeko ezilungileyo. Xa unamatyala okuthenga, kuya kuba nzima nangakumbi. Kodwa ayinakwenzeka njengoko abanye abantu besenokukholelwa. Ngapha koko, abantu abanengxaki yokuthenga ngetyala abanamaxesha onke. Ngokungafaniyo nawe, bayazazi iingcebiso kunye namaqhinga okuqesha eyona ndlu intle nangona amanqaku abo engaphantsi komgangatho.
Ngamanye amaxesha, kungcono ukusebenza ne iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba xa inqaku lakho lokuthenga ngetyala liphantsi kwiindawo zokulahla inkunkuma. Bahlala kwaye baphefumla iipropathi zezindlu, baya kwazi ngokuthe ngqo ukuba bakuthumele phi ukuba bafumane indawo efanelekileyo yokuhlala okanye indlu oza kuyiqasha xa inqaku lakho lokuthenga ngetyala likhona.
Ngamanye amaxesha, kuya kufuneka ufunde izinto zokwenza kunye nezinto ukunqanda ukufumana indawo efanelekileyo esekwe kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho nangona amanqaku akho etyala engafumananga konke konke. Ngaba uyakholelwa okanye hayi, unompu xa ufudukela kwigumbi elihle laseLa Villita eIrving TX oneliso lakho kwityala elibi. Ukuqala ngokukhangela indawo efanelekileyo yokurenta irente, nceda undwendwele iwebhusayithi: https://www.umovefree.com/Neighborhood/la-villita-apartments-irving-tx/.
Ngale nto ithethwayo, nceda sebenzisa ezi ngcebiso zilandelayo ukuze ufunde indlela yokufumana kunye nokurenta indlu emangalisayo nokuba sele unamatyala.
Icebiso # 1: Qhuba iNgxelo yeTyala lakho ngazo zontathu iindlela zeTyala
Ngaphambi kokunikezela ngokupheleleyo kumanqaku akho okuthenga ngetyala, kufuneka usebenzise ingxelo yakho yamatyala ngazo zontathu ezi ofisi zamatyala. ZiyiTransUnion, amava, kunye ne-Equifax. Ngoba? Kholwa okanye hayi, kusenokubakho iimpazamo ezincinci okanye ezinkulu zokugcina amanqaku akho etyala ezantsi kulahlwa. Ke kungcono ujonge ezi ngxelo kakuhle kwaye ubone ukuba ikhona na imiba efuna ukulungiswa.
Kwaye, kubalulekile ukwazi ukuba yeyiphi na abanini bepropathi abanokubona ngayo kuba baya kuqhuba ingxelo yakho yamatyala. Bajonge ngaphezulu kokufumana nje inqaku lakho elilula lekhredithi. Baza kujonga kwizibophelelo zakho ezingekahlawulwa, imbali yakho yetyala elidlulileyo, eyakho Imbali yokugxothwa, kwaye ngaba uhlawula iinkampani ezihlawulelwayo kunye nabanini bomhlaba ngexesha.
Zonke ezi zinto zongeza kwamehlo abanini-ndawo abanokuthatha indawo yakho bejonga kuwe njengendawo yokuhlala. Ukuba ungayicoca ingxelo yakho yamatyala ngaphambi kwexesha, uya kuba nethuba elingcono lokubonisa ukuba ungumqeshi othembekileyo.
Icebiso # 2: Gxila ekujongeni kwi-Apartment engadingi ukukhangelwa kwetyala
Le isenokungabi yinto elula ukuyiphumeza, kodwa kunokwenzeka ukuba ufunde malunga nokujonga Ulawulo lwepropathi iinkampani kunye nabanini bomhlaba abangafuni ukukhangelwa amatyala. Ukuba ungagxila ekuqeshiseni kwaba banini bepropathi / kubanini bomhlaba, uya kuba nexesha elilula lokwamkelwa njengomqeshisi kuba ngekhe bafunda ngebali lakho elingelolakho okanye uphawu olubi lwetyala.
Lumka xa uqeshisa kubanini bomhlaba abangaqinisekisi ityala lakho. Yiflegi ebomvu enokubakho kubuqhetseba bokuqeshisa. Ukwimeko enzima ngokwaneleyo njengoko inezimali, okokugqibela into oyifunayo kukufumana isaphulelo semali oyifumene nzima kumqeshi oqeshisayo.
Ingcebiso # 3: Nikeza iileta zokuBhengeza eziGuqukayo kunye neeleta zeNgcebiso kuKamva loMnini-ndlu ophathwayo
Awunakuyazi le nto, kodwa iileta ezakhayo ezintle kunye neengcebiso ezikhazimlayo zihamba kude emehlweni abo banokuba ngabanini benkundla. Ezi leta ziya kunceda ekuqinisekiseni ukuba uthembekile, unokwethenjwa, kwaye ungumqeshi ofanelekileyo abanokuziva bekhululekile ukurenta kuwo.
Abona bantu bafanelekileyo ukufumana iireferensi ezivela kwabo basebenza ngoku kunye nabaqeshi bangaphambili, bangaphambili ba sebenzi, kunye nabanye abantu abakwizikhundla eziphezulu. Ukuba uyawazi umntu odumileyo wasekuhlaleni, ayibuhlungu ukuba babhale ileta yesalathiso okanye ingcebiso egameni lakho.
Lilonke, injongo kukubonisa ukuba unoxanduva lwezemali nokuba ingxelo yakho yamatyala ibonisa ngenye indlela. Abantu bangenelwa yingxaki yemali amaxesha ngamaxesha kodwa oko akuthethi ukuba bayabulala. Ezi leta zingqinayo ziya kunceda ukubonisa ukuba ungumntu ofanelekileyo ukuthatha ithuba.
Ingcebiso # 4: Yenza ubungqina bokuba ufumana umvuzo ozinzileyo Ukuqeshisa igumbi
Eyona ndlela ilungileyo yokwenza ityala lakho ngu umqeshi ofanelekileyo Ngokungqina ukuba unengeniso ezinzileyo kwaye wabelana ngolu lwazi kunye nomnini-mhlaba onokubakho. Ngapha koko, ukuba ungabonisa ukuba wenza amatyeli amabini okanye amathathu isixa semali orentayo ngenyanga umnini-ndlu uza kubona ukuba unokuhlawula ngokuqinisekileyo indlu yabo.
Njengomzekelo, ukuba uqesha indawo yokuhlala nge- $ 1000, kwaye uthatha i-3000 yeedola ngenyanga, kwaye ezinye iindleko zakho ziphantsi, ungakubonisa oku kumnini-ndawo onokubakho. Uza kubona ukuba unakho ukubhatala ngokulula indawo yabo kwaye uya kujonga njengokhetho olungcono nokuba unayo ingxelo engentle yamatyala.
Njengoko ubona, kunzima kodwa akunakuze kwenzeke ukuba uqeshise ngendlu nangona unesikweletu. Kukho iindlela zokujikeleza inqanaba lakho elibi lokuthenga ngetyala kunye nengxelo engendawo yetyala. Ngapha koko, sabelane ngeengcebiso ezi-XNUMX ezintle kunye nawe ngasentla. Nceda usebenzise olu lwazi luxabisekileyo ukuze kulungelwe wena kwaye awuzukufumana ngxaki yokuqeshisa ngendlu entsha nangaliphi na ixesha nengxelo yakho engentle yamatyala amanqaku emboleko.
exhonyiweyo Imali yezezindlu | Ushiye uluvo |